Mpamatsy fanafody sy ozinina | China
AngelBiss koa dia manome tobim-pitsaboana sy hopitaly madinidinika miaraka amin'ny mpanentana oksizenina mikoriana betsaka manomboka amin'ny 10LPM ka hatramin'ny 100LPM. Ny fivoahana oksizenina avo roa heny dia tsy voatery ho an'ny mpanentana oksizenina 10-100LPM.
Ny mpanjifa koa dia afaka manamboatra fatra oksizenina miaraka amina toeram-pivoahana oksizena marobe arakaraka ny filany. Manaiky ny fanaingoana ny mpitan-tsindrona oksizenina avo lenta isika (ny tsindry faran'izay avo indrindra dia mety hahatratra 6 bar) Ny concentrator oksizenina avo lenta dia azo ampifandraisina amin'ny rivotra mafana mba hanomezana oxygen ho an'ireo marary mavesatra.
Ho an'ny hopitaly lehibe misy fantsom-pamokarana oksizenina, AngelBiss dia afaka manome rafitra famatsiana oksizena ara-pahasalamana manana fatrany 200 Nm³ / ora, izay afaka mamaly ny fangatahan'ny oxygen amin'ny fandriana 1.000 ao amin'ny hopitaly. Ny oksizenina natolotry ny rafitra famatsiana oksizenina AngelBiss dia mifanaraka amin'ny fenitra ara-pitsaboana miaraka amin'ny fahadiovan'ny oksizenina 93% (93% ± 3%).